साउने संक्रान्ति लागेसँगै यी ४ राशिको भाग्यमा परिवर्तन, मिल्नेछ लाभै-लाभ ! - Mitho Khabar
June 19, 2022 mithokhabarLeaveaComment on साउने संक्रान्ति लागेसँगै यी ४ राशिको भाग्यमा परिवर्तन, मिल्नेछ लाभै-लाभ !
धार्मिक र ज्योतिषीय दृष्टिबाट संक्रान्तिलाई विशेष रुप्प्मा हेर्ने गरिन्छ। सूर्यले एक राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गरेपछि त्यस दिनलाई संक्रान्तिको रुपमा मनाउने चलन छ। सूर्यले गर्ने राशि परिवर्तनकै आधारमा विक्रम संवतको नयाँ महिना शुरु पनि हुने गर्छ।सूर्यले आउने केहि दिनमा राशि परिवर्तन गर्दैछ। हाल मिथुन राशिमा रहेको सूर्य जुलाई १६ तारिखका दिन बिहान ५ बजेर २४ मिनेट पश्चात कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। सूर्यले राशि परिवर्तन गरेसँगै कर्कट संक्रान्ति अर्थात् साउने संक्रान्ति शुरु हुनेछ।सूर्यले राशि परिवर्तन गर्दा सम्पूर्ण राशिमा प्रभाव पर्नेछ। सूर्यको राशि परिवर्तनले केहि राशिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भने केहिलाई नकारात्मक। ज्योतिषीहरुका अनुसार अब हुने सूर्यको राशि परिवर्तनले निम्न ४ राशिलाई धेरै नै लाभ पुर्याउनेछ।
सूर्यको राशि परिवर्तन मेष राशि हुनेहरुका लागि धेरै राम्रो रहने देखिन्छ। उत्कृष्ट परिणामहरू मिल्नेछन्। सोचेअनुरुप सम्पूर्ण कार्य सफल रहनेछन्। आर्थिक पक्ष पनि सवल नै रहने देखिन्छ। सूर्यको राशि परिवर्तनसँगै सुख-सुविधा बढेर जानेछ। पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्न सक्ला। विद्यार्थीहरुमा पनि सूर्यको सकारात्मक प्रभाव रहनेछ। सहजै शत्रु पराजित हुनेछन्।
सूर्यको राशि परिवर्तनसँगै कन्या राशि हुनेहरुको भाग्य चम्किनेछ, आम्दानिका विभिन्ना श्रोतहरु फेला पर्नेछन्। रोजगारको क्षेत्रमा पदोन्नती प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक यात्राको योग बन्ने पनि देखिन्छ। प्रतिष्पर्धामा सहजै विजयी हुन सकिएला। स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुनेछ। पराक्रम बढ्दा धेरै नै महत्वपूर्ण कार्य सफल हुनेछन्। हरेक कार्यमा परिवारको साथ र सहयोग रहनेछ।
सूर्यको राशि परिवर्तनले तुला राशि हुनेहरुलाई प्रभावी र प्रतापी बनाउनेछ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ्नेछ। कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने राम्रो माहोल बन्दा आम्दानी बढ्नेछ। यात्राले पनि लाभ दिलाउन सक्ला। लामो समय देखि अड्किएका कार्य सम्पन्न होलान्। प्रेम जीवन उत्साहप्रद रहला। परिवारमा रहेका स्वास्थ्य समस्या देखि छुटकारा समेत मिल्नेछ। सम्मान दिलाउन सूर्यको भूमिका रहला।
सूर्यको राशि परिवर्तनले वृश्चिक राशि हुनेहरुलाई विभिन्न प्रकारका लाभ दिलाउनेछ। व्यापारमा उन्नति होला। नयाँ कार्यमा लगानी गर्ने माहोल बन्नेछ। परिवारजनको मात्र नभई मित्रजनको पनि पूर्ण सहयोग रहनेछ। शत्रुलाई सहजै पराजित गर्न सकिएला। कानुनी रुपमा रहेका समस्या देखि पानि छुटकारा मिल्नेछ। त्यस्तै प्रेम जीवन पनि सोचेजस्तै रहने देखिन्छ।
छोरिले यसरि गित गाएपछि आमा अनिता यसरी धरधरि रोइन (हेर्नुस् भिडियो )